I-Servo Motor, i-Stepper Motor, i-Servo Spindle Motor-iNewkye
Imoto yeServo yokuluka
I-motor stepper evaliweyo kunye nomqhubi
Inkqubo yoLawulo lweCNC
Umlawuli wePlasma Cutter
Impompo ukuthambisa ajikeleze
Isandla esenziwe ngesandla (Mpg)
40 Series Servo Motor
Ukubalula Motor mo ...
I-60 Series Servo Motor
I-80 Series Servo Motor
I-90 Series Servo Motor
110 Uthotho lweServo Motor
130 Uthotho lweServo Motor
130H Uthotho lweServo Motor
Ifakwe kumatshini wokwenza iBhegi kunye neminye imveliso yokupakisha.
Ifakwe kwimveliso yefenitshala yeplate, iBuddha kunye namanqaku obugcisa, njl.
Ifakwe kumatshini we-cnc, njenge-lathe, i-milling, i-grinding, iziko lomatshini njl njl.
Ifakwe kwi-welding robot, i-robot yokutshiza, i-robot e-palletizing, i-robot kunye ne-quilting
Ifakwe kumatshini wokusika iplasma, umatshini wokusika ilangatye, ukusika kwe-laser
Isetyenziswa ekuthungeni Multi-intloko umatshini oyimfakamfele, umatshini ukunitha Flat, umatshini ubambo.
Amazwe atyikitye ngokusesikweni umzi mveliso we-RCEP ungenise imeko entsha yorhwebo
Disemba / 02/2020
Ngomhla kaNovemba 15, 2020, iindaba ezinkulu zeza kwaye zaba kukugxila kwamazwe kwihlabathi liphela. Emva kweminyaka esibhozo yothethathethwano, iinkokheli zamazwe ali-15, kubandakanya i-China, i-Japan kunye ne-Singapore, batyikitya isivumelwano se-RCEP ngenkomfa yevidiyo. Kufunyenwe ukuba i-RCEP ngokubanzi ibhekisa ...
Ukuthelekiswa kokusebenza phakathi kwe-servo motor kunye ne-stepper motor
Njengenkqubo yolawulo lwelokhi evulekileyo, imoto ekuhamba kuyo inolwalamano olubalulekileyo netekhnoloji yolawulo lwedijithali yale mihla. Kule nkqubo yangoku yolawulo lwedijithali lwasekhaya, i-stepper motor isetyenziswa ngokubanzi. Ngokuvela kwenkqubo ye-AC servo yedijithali epheleleyo, i-AC servo motor isetyenziswa ngakumbi kwi-digita ...
Ngaba uyayazi imoto ehamba phambili?
Isithuthi se-Stepper licandelo lolawulo oluvulekileyo lokuvula eliguqula isiginali yokubetha yombane ibe kukufuduka okujikelezileyo okanye ukufuduka komgama. Kwimeko yokungagqithisi umthwalo, isantya seemoto, indawo yokumisa ixhomekeke kuphela kumqondiso wesibonakaliso sokubetha kunye nenombolo yokubetha, kwaye ayichaphazeleki lutshintsho lomthwalo, th ...
I-Hybrid Stepper Motor, IServo Motor Actuator, I-220 Volt Ac Servo Motor, Kuvalwe uMqhubi weSantya seMoto, I-Stepper Motor ene-Encoder, Imoto enkulu yeServo,